Nepal Auto | सेलिब्रिटीका दशैं योजना : कुन कलाकारको दशैंमा के छ योजना ?
सेलिब्रिटीका दशैं योजना : कुन कलाकारको दशैंमा के छ योजना ? 25 Ashwin, 2075
हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान चाड दशैं नेपालीको घरआगनमा आइसकेको छ । यसको रौनकताले यतिबेला आम नेपालीलाई छोइसकेको छ । मिठो खाने, नया कपडा लगाउने, आफन्त साथीभाई भेटघाट गर्ने, मान्यजनबाट आशिर्वाद लिने यो चाडको मूख्य विशेषता हो ।
त्यसो त किनमेल गर्ने देखि गाउँघर फर्कने मानिसहरुको भिड सहर बजारमा देख्न सकिन्छ । दशंैलाई मानिसहरुले विभिन्न ढंगले लिने गरेका छन् । दशैंलाई कतिपयले सम्बन्ध नवीकरण गर्ने समयको रुपमा पनि लिन्छन् भने धेरैजसोले घर फर्कने मौसमको रुपमा लिन्छन् । यहि मौसमले यतिबेला कलाकारिता क्षेत्रलाई पनि छोएको छ । यस क्षेत्रमा लागेका कलाकर्मीहरुले यस वर्षको दशैंलाई अविस्मरणिय बनाउनका लागि विभिन्न योजना बनाएका छन् ।
अभिनेत्री निता ढुङ्गाना दशैं मनाउनका लागि जन्मस्थान हेटौंडा जाने तयारीमा छिन् । तर, दशैं लाग्नुभन्दा केहि दिन अघि सपिङका लागि बैंकक जा“दैछिन् । बैंककबाट फर्केपछि उनी परिवारस“गै रमाइलो गरेर दशैं मनाउ“छिन् । दशैंको समयमा कतिपय मानिसहरु विभिन्न ठाउ“मा घुम्न जाने योजना बनाउ“छन् तर निता भने दशैं जस्तो महान चाडमा परिवारसँग अलग भएर बस्न सक्दिनन् । उनी भन्छिन्– दशैं हाम्रो महान चाड हो त्यसैले यो बेलामा मलाई घुम्न जान मन लाग्दैन, परिवारस“गै तितामिठा कुराकानी गरेर बस्न रुचाउ“छु ।’ दशैंमा मान्यजनको हातबाट टिका लगाएर आशिर्वाद थाप्न आफूलाई निकै रमाइलो लाग्ने निता बताउँछिन् । त्यसो त उनी यसपाली दशैंमा सकेसम्म सबै मान्यजनको हातबाट टिका लगाउने सोंचमा छिन् ।
अभिनेता पल शाह यसपालीको दशैं काठमाडौंमै परिवारसँग मनाउने योजनामा छन् । विगत केहि वर्ष यता काठमाडौंमै दशैं मनाउँदै आएका पल शाह यसपाली दशैंमा बहिनी, ममी, सानीममीहरुसँग घरमै तास खेलेर रमाइलो गर्ने मनस्थितिमा छन् । यद्यपि दशैंको टिका लगाइसकेपछि भने साथीहरुसँग बर्दिबास घुम्न जाने योजना रहेको तर निश्चित नभएको पल बताउँछन् ।
चलचित्र लभ स्टेसनको छायांकनमा व्यस्त रहेका अभिनेता प्रदिप खड्का यसपालीको दशैंमा फुर्सद भयो भने साथीहरुसँग भेटघाट गरेर रमाइलो गर्ने बताउँछन् । यतिबेला उनी चलचित्रको छायांकनका लागि भारतको सिक्किममा छन् । प्रदिप भन्छन्– सायद म चलचित्रको छायांकनमै व्यस्त हुन्छु होला यद्यपि दशैंका लागि केहि दिन छायांकन रोकियो भने काठमाडौं आएर परिवार, साथीभाईहरुसँग रमाइलो गर्दै दशंै मनाउने योजना छ ।
अभिनेत्री वर्षा राउत यसपालीको दशैंमा आफ्नै गाउँ सिन्धुली जाने तयारीमा छिन् । तर दशैं भन्दा केहि दिन अघि भने साथीभाईहरुसँग कतै घुम्न जाने तयारी भएको तर निश्चित नभएको वर्षा बताउँछिन् । वर्षा नवमीको दिन सिन्धुली जान्छिन् त्यहाँ उनले हजुबुबा, ठूलोबुबाहरुको हातबाट दशमीको दिन टिका अनि आशिर्वाद ग्रहण गरेर काठमाडौं फर्कन्छिन् । वर्षा भन्छिन् – सिन्धुलीमा हजुरबुबा र ठूलोबुबाको हातबाट टिका लगाएर काठमाडौं आउँछु त्यसपछि मात्र काठमाडौंका आफन्तहरुको हातबाट टिका लगाउने योजनामा छु ।
अभिनेता राजेश हमाल श्रीमती, दाजुभाई तथा आफन्तहरुको साथमा यसपालीको दशैं मनाउने योजनामा छन् । हमाल भन्छन् – दशैंका लागि विभिन्न कार्यक्रममा निमन्त्रणा आएको छ तर दशैं परिवारकै साथमा मनाउने मनस्थितिमा छु । दशैंको केही दिन पछि भने हमाल विदेशतर्फ लाग्नेछन् ।
अभिनेता भूवन केसी वर्षमा एकपटक आउने चाड परिवारसँगै मनाउन चाहन्छन् । दशैंमा अलिकति भएपनि फूर्सद मिल्ने भएकाले उनी यसपाली दशैंमा पुराना साथीभाईहरुसँग भेटघाट गरेर दुःखसुख साटासाट गर्ने मनस्थितिमा छन् । यसको अलावा विशेष योजना नबनाएता पनि मातापिताको हातबाट टिका लगाउने, र आफूभन्दा सानालाई टिका लगाइदिने नियमित कर्ममा व्यस्त हुने भूवन बताउँछन् ।
गायक यशकुमार यसपालीको दशैं अमेरिकामा मनाउने सोंचमा छन् । यतिबेला उनको अभिनय तथा निर्देशन रहेको चलचित्र छिरिङ प्रदर्शन भैरहेको छ । सोहि चलचित्र लिएर आफू दशैं अघि नै अमेरिका जाने तयारीमा रहेको उनी बताउँछन् ।
चलचित्र ए मेरो हजुर ३ मा व्यस्त रहेका अभिनेता अनमोल केसी फूर्सद भयो भने परिवारसँग रमाइलो गर्दै दशैं मनाउने योजनामा छन् । उनी भन्छन् – चलचित्रको कामले खासै फूर्सद छैन तर फूर्सद भयो भने परिवारको साथमा दशैं मनाउँछु । अनमोलको यसपाली दशैं भन्दा पनि तिहार अझै विशेष बन्दै छ, किनभने तिहारमा अमेरिकामा रहेको उनका दाजु विवेक तथा दिदी काजल नेपाल आउँदैछन् । तिहार पनि दाईदिदीसँग रमाइलो गर्दै मनाउने योजना रहेको अनमोल बताउँछन् ।
अभिनेत्री आँचल शर्मा यसपटकको दशैं आफ्नै परिवारसँग रमाइलो गर्दै मनाउने योजनामा छिन् । बाहिरतिर घुम्न जान खासै नरुचाउने आँचल दशैं पर्व एकदमै मनपर्ने बताउँछिन् । त्यसो त यो पर्वका बेलामा परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँमा बसेर रमाइलो गर्ने, तास खेल्ने, आफन्तहरुको घर जाने मान्यजनको हातबाट टिका आशिर्वाद ग्रहण गरेर मनाउने साेंचमा छिन् ।
अभिनेत्री रिमा विश्वकर्मा यसपालीको दशैं काठमाडौंमै मनाउने योजनामा छिन् । चलचित्र सरकारी जागिरेको सुटिङ र नेपाल आइडलको व्यस्तताले गर्दा बाहिरतिर घुम्न जानका लागि फुर्सद नभएकाले काठमाडौंमै रहनुपरेको रिमा बताउँछिन् । दशैंको केही दिनका लागि रिमाका बुबाआमा बर्दिया जाँदै छन् तर उनी भने काठमाडौंमै साथीभाईहरुसँग भेटेर रमाइलो गर्दै दशैं मनाउने सोंचमा छिन् । यदि फुर्सद पाइहालिन् भने उनले पोखरा जाने योजना पनि बनाएकी छिन् । रिमा भन्छिन् – यदि फुर्सद भयो भने दुई तीन दिनका लागि पोखरातिर जाने सोंच बनाएकी छु ।
गायक हेमन्त शर्मा यसपटकको दशैं मनाउनका लागि भैरहवा जाने तयारीमा छन् । उनी दशैंको फुलपातीको दिन भैरहवा जाँदैछन् । दशैंभन्दा अघि उनी दशैं विशेष सांगीतिक कार्यक्रमका लागि देशका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । यसको अलावा आफ्नो जन्मथलो गएर साथीभाईहरुसँग रमाइलो गरेर, मिठो खाएर, पुस्तक पढेर, टिका आशिर्वाद थापेर दशैंलाई विशेष बनाउने सोंचमा रहेको शर्मा बताउँछन् ।
अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी यसपटकको दशैं काठमाडौं सीतापाइलास्थित आफ्नै घरमा मनाउँदैछिन् । दशैंका लागि त्यस्तो विशेष योजना नबनाएकी वर्षा यसपाली सकेसम्म सबै आफन्तहरुलाई भेट्ने योजनामा छिन् । अर्को कुरा उनी हजुरबुबा हजुरआमासँग बस्ने र धेरैजसो आफन्त घरमै आउने भएकाले यसपालीको दशैं विशेष हुने वर्षा बताउँछिन् ।
अभिनेता आकाश श्रेष्ठ यसपालीको दशैं मनाउनका लागि दाङ जाने योजनामा छन् । उनी दशैंमा विगतको जस्तै साथीभाई भेटेर मिठा परिकार खाएर तास खेलेर मनाउने सोंचमा छन् । वर्षभरि चलचित्रको सुटिङ व्यस्त रहने यिनका लागि फूर्सद पाउने भनेको दशैं नै हो । त्यसैले महान चाड दशैं परिवार आफन्त अनि साथीभाईहरुसँग रमाइलो गर्दै मनाउने उनी बताउँछन् ।
गायक तथा संगीतकार कालिप्रसाद बास्कोटा यसपालीको दशैं परिवार आफन्तसँगै मनाउने योजनामा छन् । उनी नवमीको दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छन् । त्यसपछि साथीभाई आफन्तहरुसँगको भेटघाटमा जुट्ने बास्कोटा बताउँछन् ।
काठमाडौंमा दैनिक १ हजार सवारी कारबाहीमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सावारी नियम उल्लङ्घन गर्ने दैनिक १ हजारभन्दा बढी स...
कञ्चनपुरमा ट्याक्टरको ठक्करबाट एकको मृत्यु
कञ्चनपुर – ट्रयाक्टरको ठक्करबाट कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा आज बिहान एक युवकको...
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा ढुंगा हटाइदै, बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध
काठमाडौं – नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको घुमाउने भन्ने स्थानमा भएको चट्टानी ढुंगाल...